NLP - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Mobile, Falanqaynta
Luqad Dhaqameed Natural
Waxyaabaha lagaga hadlayo afka waa laanta sirdoonka macmal kaas oo ka hadlaya soo saarista, fahamka iyo falanqaynta afafka ay dadku si dabiici ah u isticmaalaan si ay ula xiriiraan kombiyuutarada qaababka hadalka iyo qoraalka labadaba iyagoo adeegsanaya luqadaha aadanaha ee dabiiciga ah halkii ay ka ahaan lahaayeen luuqadaha kombiyuutarka. sirdoonka macmal waa injineernimada iyo sayniska dhisidda iyo dhisidda barnaamijyada kombiyuutarka iyo mashiinnada caqliga leh. Kuma koobna farsamooyin bayooloji ahaan la arki karo oo la xiriira fikradda adeegsiga kombiyuutarada si loo fahmo garaadka aadanaha.
Interface AI NLP
Hababka ugu dambeeyay ee NLP waxay ku saleysan yihiin mashiinka waxbarashada, halkaas oo xogta lagu quudiyo waxbarashada mishiinka leh fal kasta oo aan ficil lahayn ayaa quudiya ka dibna hawshu si otomaatig ah ayay u socotaa iyada oo aan si joogto ah u baahnayn faragelin bini'aadam iyo mid gacanta ah. Machine waxbarashada waxay u oggolaatay kombiyuutarrada inay helaan aragtiyo qarsoon, iyagoo adeegsanaya algorithms -ka oo si isdaba joog ah uga hela xogta la siiyay, iyada oo aan si cad loo qorsheynin halka laga eegi doono. Inta badan cilmi -baarista la sameynayo farsamaynta luqadda dabiiciga ah waxay ku wareegaysaa raadinta, gaar ahaan ganacsi raadin. Waa kartida barnaamijka kombiyuutarka si uu u fahmo hadalka aadanaha sida loogu hadlo.
NLP inta badan loo yaqaan luqadaha xisaabinta waxay leedahay hawlo qaarkood oo ku lug leh sida soo saarista cidda magacaaban, qoto dheer Analytics, Qaybinta jumlada, xallinta tixraaca wadaaga, qayb-hadalka calaamadaynta, iyo kala saaridda. Waa goobta diiradda saareysa isdhexgalka ka dhexeeya kombiyuutarada iyo luqadda aadanaha. Waxay ku fadhidaa isgoyska ee sirdoonka macmal, luqadaha xisaabinta, iyo sayniska kombiyuutarka. Raadin kasta oo la isticmaalayo farsamaynta luqadda dabiiciga ah, barnaamijka laftiisa ayaa aqoonsan doona erey kasta oo la soo gaabiyo ama soo gaabin. Caqabaddu waxay ku jirtaa halka kombiyuutarradu ay tahay inay fahmaan habka aadamuhu u isticmaalo iyo barashada luqadda. Luuqadda aadamuhu ma aha mid aad u fudud mana aha mid sax ah. Si kombiyuutarradu u fahmaan luqadda aadanaha, waxay u baahan yihiin inay fahmaan fikradaha iyo isku xirnaanta ereyada si loo abuuro jumlad macno leh. Tusaale ahaan, tixgeli odhaahda “Ilmuhu wax liqo wuu duulaa.” Hadda, tani waxay yeelan kartaa macnayaal kala duwan taasoo ku adkeyneysa barnaamijka inuu fahmo macnaha saxda ah ee ka dambeeya. Sida erayga duul ama liqid ayaa loo adeegsadaa fal ahaan, taas oo ilmaha ka dhigaysa sifo ama magac. Xilliga isgaarsiinta aadanaha, macnaha jumladuhu waxay ku xiran tahay fahamka qof walba mugdi ku jiro afafka aadanaha iyo duruufaha lagu soo gudbiyay. Tani waa halka softiweerka loo baahan yahay in loo qorsheeyo si loo fahmo qaab dhismeedka luqadda iyo macnaha guud.
AI waxay noqon doontaa habka ugu cusub ee aan ula falgalno dhammaan qalabyadayada; baabuurteena, talaajadaha, telefoonada casriga ah, albaabka hore iyo habka kulaylka dhexe. Waxaan ku noolaan lahayn adduun had iyo jeer ku jira. Ka dhigista aaladahayada si ay u saadaaliyaan ulajeedkeena oo aynu u fahanno macnaha guud waa qaacidada lagu dhisayo wax soo saarka maskaxda aadka u culus. Hal bilyan oo 'waxyaalo' ah oo ku xiran ayaa hadda si firfircoon uga codsanaya taageerada AI dhufto ee.